သစ်တော်သီး Launcher ကိုဗားရှင်း 1.4.41 - Android အတွက် APK ကိုဒေါင်းလုပ်
ပင်မစာမျက်နှာ » launchers » သစ်တော်သီးတင်ပေးသူ
သစ်တော်သီးတင်ပေးသူ APK ကို
• app ကိုအံဆွဲထဲမှာဖိုင်တွဲများ။ •သင့်အံဆွဲစတိုင် (ဒေါင်လိုက်, မျက်နှာ, အပိုင်း) ကိုရွေးချယ်ပါ။
• shortcuts တွေကိုများအတွက်လုပ်ရပ်တွေကိုဖွင့်ပွတ်ဆွဲပါ။
သစ်တော်တွေနဲ့ပေါင်းစပ်ယခုအဖော်ယခု Google မှ•။ လည်းထပ်အဖြစ်ပြသနိုင်ဖို့ option ။
•စိတ်ကြိုက် desktop ပေါ်မှာ။ သင့်ရဲ့အညွှန်းကိန်းစတိုင်, ဇယားကွက်အရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ပါ, အိုင်ကွန်ဝေါလ်ပေပါနှင့်အနားသတ် scroll, စိတ်ကြိုက်, သော့ခတ် desktop ပေါ်ကထိပ်တန်းအရိပ်တံဆိပ်များ။
•အံဆွဲမီနူး customisible Card ကိုနောက်ခံဇယားကွက်အရွယ်အစား, မျိုး mode ကို (အက္ခရာစဉ်သို့မဟုတ်အချိန် install), ပြပွဲရှာဖွေရေးဘား, ဖွင့်လှစ်ပြီးအများကြီးပိုပေးရန်အထိုင် Pull, ဝဲအရောင်တိုက်ရိုက်စာစောင်ကို apps များခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။
•အထိုင်။ သငျသညျ icon များ၏ပြောင်းလဲမှုအရေအတွက်ကို disable dock ကိုက၎င်း၏နောက်ခံပြောင်းလဲအထိုင်အတွက်တံဆိပ်များကို enable နိုင်ပါတယ်။
•သင့် apps များ Hide ။
• App ကို shortcuts တွေကို backport
•ဖိုင်တွဲများ, preview ကို၏အဆင်းအရောင်, နောက်ခံ, တံဆိပ်များ, ဖိုလ်ဒါကိုဖွင့်လှစ်ကာတွန်း၏အပြင်အဆင်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်
•ဖိုင်တွဲနှုန်းမတ်ဖိုင်တွဲများ (ပွတ်ဆွဲဖွင့်လှစ်ရန်, ပထမဦးဆုံး app ကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုနှိပ်ပါ) အတွက်ပံ့ပိုးမှု။ စမတ်ဖိုလ်ဒါတစ်ခုတံဆိပ်နှင့်အတူပြသလျက်ရှိသည်။ option ကိုစမတ်ဖိုင်တွဲအဖြစ်တိုင်းအသစ်က folder ကိုဖန်တီးရန်အသုံးပြုနိုင်သည့်အော်တိုမတ်ဖိုင်တွဲများအဘို့ setting တွင်ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
•အိုင်ကွန် Pack - Play Store ကိုအပေါ်သစ်တော်ဖွင့်တင်ဘို့အိုင်ကွန်ထုပ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ကိုရှာပါ။
•ည mode ကို
• (အထိုင်အထကျပါသို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော) အထိုင်အတွက် searchbar ပြသရန် Option ကို
•ပြောင်းလဲခြင်း font ကိုစတိုင်၎င်း၏အရောင်ပြောင်းလဲမှု app ကိုဖွင့်လှစ်ကာတွန်း, orientation ကိုပြောင်းလဲအကြောင်းကြားစာ bar ကိုဖုံးကွယ်။
• Backup ကို & Restore - Backup ကို & Restore ကိုသင် backup လုပ်ထားရန်သင့် layout ကိုနှင့်သစ်တော်သီး setting များကိုခွင့်ပြု
•ဟနျအမူအရာ - ဆင်းပွတ်ဆွဲနှစ်ချက်ကိုထိပုတ်ပါအပေါ်သို့ပွတ်ဆွဲ ,. သငျသညျကို default screen ပေါ်မှာသို့မဟုတ်မည်သည့် screen ပေါ်မှာအိမ်ပြန်နှိပ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးစာမျက်နှာခလုတ်ကိုလုပ်ရပ်များအပေါ် left မှပထမဦးဆုံးစာမျက်နှာပေါ်တွင်ညာဘက်ပွတ်ဆွဲ, ပွတ်ဆွဲဘာလုပ်ရမှန်းကိုရှေးခယျြ
ဒီ app ကိုဤ (သစ်တော်ဖွင့်တင်ရဲ့အမူအရာသို့မဟုတ်သစ်တော်သီးအရေးယူသုံးပြီး) ဖုန်းကို lock ဖို့လိုအပျသညျ, device ကိုစီမံခနျ့ခှဲသူဖြစ်လာဖို့ကမေးတယ်။
သငျသညျသစ်တော်ဖွင့်တင် Pro ကိုဝယ်ယူခြင်းဖြင့်အောက်ပါအင်္ဂါရပ်များသော့ဖွင့်နိုင်ပါတယ်
အံဆွဲဖိုလ်ဒါထဲမှာ 10 apps များထက် ပို. ရှိသည်
ပြောင်းလဲမှုကိုတံဆိပ်စတိုင် (အစက်သို့မဟုတ် count က)
app ကိုအိုင်ကွန်ထဲကနေတံဆိပ်အရောင် Extract
အမူအရာ Proximity နှင့်လှုပ်ခါ
Google ကပေါင်းအသိုင်းအဝိုင်း: plus.google.com/communities/115560086437173729184
အမူအရာနဲ့သစ်တော်သီးလုပ်ရပ်များများအတွက် Lock ကို / Unlock desktop ပေါ်မှာ option ကို Add
3.49 ကို MB
Yajat Kumar က